T-shirts abụọ maka ndị lụrụ di na nwunye - àgwà mara mma nke a na-ewu ewu nke agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ nke oge a. Ihe eji ekpuchi ihe a bụ ihe dị mma maka ezumike ọhụụ, maka oge ịse foto , ma na-ejikwa uwe na-agbanwe mgbe ọ bụla agbamakwụkwọ. Taa, ọtụtụ ndị bratschuyuschaya na-achọ ịhọrọ T-shirts na-adọrọ mmasị ma ọ bụ ederede magburu onwe ya. Ihe ngwọta dị otú ahụ dị mma maka oge ọkọchị, n'ihi na a na-eji t-shirts eme ihe mgbe niile. Nhọrọ nke ihe onwunwe bụkwa n'ihi eziokwu ahụ bụ na ihe kachasị mma na-ese onyinyo na ihe osise. Ka o sina dị, na oge nke oge na ọbụna n'oge agbamakwụkwọ oge oyi, ị nwekwara ike izute ndị na-eto eto na uwe mbụ.
Ụdị T-shirts maka ndị lụrụ di na nwunye na-ekwukarị ọhụụ ọhụrụ. Ya mere, ihe kachasị ewu ewu bụ ụdị ejiji ejiji na ejiji, ụmụ agbọghọ na-ekpuchi ákwà na nwa nwoke nwere nru ububa, agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ na ihe oyiyi ndị ọzọ na isiokwu agbamakwụkwọ. Ọzọkwa, foto dị iche iche na T-shirts nwere ike imeju ibe ha. Dịka ọmụmaatụ, ọkara nke obi na-adabere n'ụdị nwanyị, na nke abụọ - nwoke. A na-ejikarị ya eme ihe na igodo na obi, agbamakwụkwọ na ihe yiri ya.
Ihe ndekọ agbamakwụkwọ na T-shirts
Dị ka a na-achị, ejiji t-shirts niile agbakwunyere na ihe e dere. Okpuru okwu nwere ike iburu ihe omimi di omimi, ma kwuputa onodu ndi ohuru ohuru. Ndị kachasị ewu ewu bụ ụdị na okwu ndị dị ka "naanị di na nwunye," "di na nwunye", "obi ụtọ", "ọnụ ebighi-ebi". Ọzọkwa, nhọrọ dị oke mkpa n'oge a bụ ụbọchị alụmdi na nwunye na ụzọ T-shirts. Ọtụtụ mgbe ndị na-emepụta uwe na-enye uwe ọcha, n'ihi na na nzụlite dịpụrụ adịpụ, ihe ederede ka mma. Ma ọ bụrụ na achọrọ gị, ịnwere ike ịhọrọ ihe atụ nke ndo ọ bụla ị chọrọ.
Uwe ejiji akwa
Nwanyị na-alụ ọhụrụ - uwe na agba kacha mma
Agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ - 2013
Agba akpụkpọ ụkwụ agbamakwụkwọ
Sunlight Nwa Mgbaaka
Agbamakwụkwọ na corset
Uwe uwe agbamakwụkwọ site n'aka Eli Saab
Agbamakwụkwọ na akwa
Egwuregwu Agbamakwụkwọ nke Platinum
Olee otú ịhọrọ uwe agbamakwụkwọ dị ka ọnụ ọgụgụ?
Uwe Akwa Uwe Ahu Umu
Ezigbo eze eze - esi eji ejiji maka agbamakwụkwọ n'oge oyi?
Ndị na-elekọta nwunye ọhụrụ ahụ
Album album - scrapbooking
Kasị nwamba nwamba
Uwe agbamakwụkwọ n'ikike Grik 2016
Ụlọ elu na-ekpuchi "mbara igwe"
Ejiji eji eme ememe 2016
Esi eweputa currant na oge opupu ihe ubi - aro maka mmalite ndi oru ugbo
Ụcha na-acha ọbara ọbara
Echiche nke "ejiji"
Benedict Cumberbatch zipụrụ ọchịchị ndị Britain na adreesị na-adịghị mma
Mgbanwe mgbanwe nke ibu: gini bu ihe omimi nke anya nku anya na ogologo?
Kedu ka ha si akpụ nwamba?
Psychology nke ileghara anya
Kedu mgbe ndị na-amụ nwa na-amụ nwa?
Balyk si na silver carp na ọnọdụ obibi
Pyoderma - ọgwụgwọ
Ejiji ejiji nke ejiji 2014
Ụjọ nke oghere ụyọkọ
Uwe ahia maka umu nwanyi
Jam si persimmon
Tansy na oge nke kwa ọnwa